Indlela yokunyamekela i-parrot
Iiprorothi ziintaka ezinqabileyo kwaye ucoceko kuphela luyakwazi ukwandisa ubomi bakhe ekhaya. Izilwanyana zasemakhaya azikho uvuyo ekukhulumisaneni kunye nezilwanyana ezinobunzima, ezinqambileyo, ezinamaqabunga, ezinomlilo kunye nezinye izilwanyana, kodwa kunye nokunyamekela imihla ngemihla ngokuhamba ngezilwanyana ezibizayo nezithandwa, ukuhlamba nokutya.
Kwabaninzi abantu abanama-hamsters, iiproti, intlanzi, izinja kunye neekati baba ngabahlobo babo bokwenene, banokuthetha ngezinto zonke ehlabathini, malunga nokuvuya kunye neengxaki, malunga nomsebenzi wokusebenza, unokudlala. Izilwanyana aziphosa ngexesha elinzima, ungazithengisi kwaye zihlala zikuncoma ngokugubungela, ukuhlambalaza, ukugcoba.
Unokunyamekela njani iproti?
Uninzi alugcinanga, kodwa izilwanyana eziliqela kanye. Yaye nendlela yokugcina nokufundisa izinja kunye neekati, akukho mibuzo ekhethekileyo, kodwa indlela yokunyamekela i-parrot, le mibuzo iyindawo yonke. Abo baye banquma ukuba ne-parrot bafanele bazi ukuba le ntaka yinto engabonakaliyo kwelizwe lethu, ngoko ke iimeko zalo zokuphila, ukutya, kufuneka zibe sisondelene nemvelo ngokusemandleni. Oku kuya kusindisa iproti yesifo, ukuziphatha kakubi nokuntuleka kwesidlo. Ibhokhwe ifakwe kwisigaba sokukhanya sendlu okanye igumbi elinokushisa okuphezulu kwama-25 ukuya kuma-35 degrees kunye neqondo elifanelekileyo lokuphuphuma umoya. Ikhefu likhethwa ngokuxhomekeka kubukhulu besilwanyana.
Into ebaluleke kakhulu ekunyamekeleni iproti kukugcina iinkqubo ezininzi. Kabini ngosuku, kuyimfuneko ukuhlambulula nokususa i-cell. Xa uhlamba i-bottom akudingeki ukuba usebenzise ama-detergents, kuya kubakho amanzi afudumele kunye nesiponti esithambileyo ukususa ama-husk kwi-feed kunye ne-droppings. Inkqubo yokucoca yonke inokuthatha imizuzu eyi-15.
Ukutya kwilwanyana kufuneka kuthengwe, kufuneka kube namavithamini kunye nama-iodine, ngenxa yokuba ukungabikho kwamavithamini kunye nokukhanya kwelanga kuya kubangela izifo ezinzulu zeentaka. Ukutya kufuneka kudibaniswe neentlobo ezahlukeneyo zezithelo ezomileyo, imbewu, okusanhlamvu. Kuphela ukuba i-parrot ifumana amandla alungileyo, ngaba iya kukukholisa kunye ne-trills yayo evuyiweyo kunye nemihlali.
Ngama-parrots, kubalulekile ukunika amanzi ahlanjululwe ngefayile okanye ebilisiwe, ukwenzela ukuba le ntaka ayifumaneki i-microbes ukusuka kumanzi angcolileyo. Ukuhlamba izitya nge-parrot kuyimfuneko rhoqo iintsuku ezimbini, emva kokuba zonke iiproti zizintaka ezicocekileyo, abayi kudla nokusela kwiitya zokungcola. Ucoceko kuphela lunokuyandisa ixesha elivuyoleyo le-parrot kule ndawo.
Ukuhlamba yonke imihla ukuba ungasususi, kufuneka uhlambulule i-cage kanye ngeveki kunye ne-brush ekhethekileyo. Ukuze ugweme ukubetha nokubetha ukusuka kwicala le-parrot, xa uza kucoca iintsiba ezingaphezulu, kungcono ukugqoka iiglavu ezithambileyo zerabha. Oku kuya kuthintela ukubonakala kwemirhubhe kunye nokubomvu kwesikhumba. Kanye emva kweentsuku ezintathu, i-parrot kufuneka ikhutshwe kwi-cage ukuze intaka ikwazi "ukunweba" amaphiko ayo kwaye ingalahleki.
Unokunyamekela i-parrot ekhaya, ekhokelwa yizi ngcebiso kwaye emva koko i-pet yakho iyakukuvuyela kunye nemizi yakhe.
Indlela yokugcina isilwanyana ekhaya
Ukuzala kwezinja zaseBasenji
Iziqulatho zeerati yokunyusa
Unokunyamekela njani ama-aquarium frogs
Iitartlets nge jam kunye ne-marshmallow cream
Imfundo yabantwana kweli hlabathi lanamhlanje
I-Pangasius kwi "coconut coat"
I-asthma ye-Bronchial, yintoni na indlela yokunyanga ngayo
Ngaba ndifuna isilwanyana kumntwana wam?
Iindlela zeHormonal kunye nezithintelo zokukhulelwa
Ndingayithethelela ntoni na?
Isitshalo seqanda kunye ne-zucchini
Marsala yokupheka okukhanyayo
Indlela yokuhlala kwintsapho kunye nomrhwebi
Ziziphi izinto ezingafanele zigcinwe endlwini?
Iipropati zeoli efunekayo yesardadi